Matongerwo eNyika, 08 Nyamavhuvhu 2018
Chitatu 8 Nyamavhuvhu 2018
Nyamavhuvhu 08, 2018
Magweta aVaChamisa Anoti Agadzirira Kusvitsa Mapepa Awo kuMatare
Vachitaura nevatori venhau muHarare, rimwe remagweta aVaChamisa, VaThabani Mpofu, vati vachaendesa mapepa kumatare nguvai asi vati vachaendesa mukati memazuva manomwe sezvinotarisirwa nebumbiro remitemo yenyika.
VaChiwenga Vanoramba Kupindura Mibvunzo yeVatori veNhau
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, VaConstantino Chiwenga, varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau vange vachida kuziva kuti ndiyani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa zvakazokonzera kufa kwevanhu vanomwe.
MDC Alliance Inoti Nguva Ichiripo Kuti Isvitse Magwaro Ayo kuMatare
Chipangamazano uye vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, Doctor Nkululeko Sibanda, vanoti hurongwa hwekuenda kumatare huri mugwara sezvo vachifanirwa kuita izvi musi weChina usati wapfuura.
Nyamavhuvhu 07, 2018
Zanu-PF Yopembera Kukunda Vatsigiri vaVaMugabe kwaZvimba
Bato reZanu PF rinoti riri kufara nekukunda kwarakaita munzvimbo dzekwaZvimba uko kunobva vaimbova mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Nhengo dzeMDC Alliance Dzinobvisiswa Mari yeChibatiso
Nhengo dzeMDC Alliance makumi maviri nenomwe dzakasungwa zvichitevera kuratidzira kwakaitika muHarare svondo rapera, dzapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kubva kwadzo.
Human Rights Watch Inoti Mauto Ari Kurova Vanhu Zvakaipisisa
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu, reHuman Rights Watch, rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu zvichitevera kurohwa kuri kuitwa vanhu nemauto.
Vanhu Vogara Vakabatira Ura Mumaoko Munyika Yavo Vachityira Hupenyu Hwavo
Vanhu vapindwa nekutya kunotyisa zvikuru zvichitevera kudirwa kwakaitwa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji pamwe nepambwa kuri kuitwa vanhu nevarume vanenge vakapakatira zvombo.
Nyamavhuvhu 06, 2018
Nyakupomerwa Mhosva yeKupisa Musha weNhengo yeZanu PF Anomiswa Mudare kwaMutar
VaOzwell Chitere vari kumirirwa nemagweta anosanganisira VaRangarirai Mubata, VaBlessing Nyamaropa naAmai Peggy Tavagadza.
MDC Alliance Yozivisa neChipiri Zuva Rainosvitsa Magwaro Ayo kuElectoral Court
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutauriri waVaChamisa, uye vari chipangamazano mazano chavo munyaya dzematongerwo enyika, Dr Nkululeko Sibanda, vati kuenda kumatare ndeimwe yenzira dzavachashandisa kubudisa chokwadi chezvakabuda musarudzo, kwete zvakaziviswa neZec.
Zimbabwe Ine Vakuru Vanozivikanwa neNyaya dzeMhirizhonga?
Studio7 neMedia Center dzabatana muchirongwa chaunganidza vatori vrnhau pamwe neveruzhinji vachikurukura mafambiro akaita sarudzo pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro Nyamavhuvhu 6, 2018.
Mushandi weZec Akavhiringidza Mavhoti Oshanda Akachengetedzwa neMapurisa
Mapurisa anosvika gumi nemashanu atanga kuchengetedza VaMasiri pamahofisi avo muChegutu vamwe vasingazivikanwi kuti ndivanani vari kuvachengetedza kumba kwavo.